IDelta Air Lines imemezela i-EVP entsha kanye noMphathi Omkhulu Wezezimali
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Abantu » IDelta Air Lines imemezela i-EVP entsha kanye noMphathi Omkhulu Wezezimali
Airlines • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Kwangathi 22, 2021
UDan Janki uzobheka ukubikwa kwezezimali, ukulawulwa kwezinkampani, ukucwaningwa kwamabhizinisi, ukuhlelwa kwezezimali, imikhumbi kanye nohlelo lokuhlinzekwa kweTechOps, ukuphathwa kukaphethiloli, kufaka phakathi ukucwenga kweDelta, ubudlelwano nabatshalizimali, ukuphathwa kokuthengwa kwempahla kanye nomgcinimafa.
UDan ujoyina iDelta evela kwaGeneral Electric, lapho njengamanje eyiSekela likaMongameli oPhezulu kanye ne-CEO ye-GE Power Portfolio
UDan Janki naye uzojoyina iKomidi Lobuholi beDelta
UDan waziwa ngokusebenzelana kwakhe okusondelene namaqembu akhe kanye nokugxila kwamakhasimende okuqinile
IDelta Air Lines iyaqhubeka nokwakha iqembu layo lobuholi njengoba indizela ekululameni, uDan Janki ejoyina inkampani yezindiza njenge-EVP yayo entsha kanye noMphathi Wezezimali omusha.
As IDelta Air LineUmholi ophambili kwezezimali, uDan uzobheka ukubikwa kwezezimali, ukulawulwa kwezinhlangano, ukucwaningwa kwamabhizinisi, ukuhlelwa kwezezimali, imikhumbi kanye nokuhlinzekwa kweTechOps, ukuphathwa kukaphethiloli, kufaka phakathi ukuhluzwa kweDelta, ubudlelwano nabatshalizimali, ukuphathwa kwempahla kanye nomgcinimafa. Ngaphezu kwalokho, amasu ezinkampani azobika kuDan. Uzobuye ajoyine iKomidi lobuholi beDelta.
UDan ujoyina iDelta evela kwaGeneral Electric, lapho njengamanje eyiSekela likaMongameli oPhezulu kanye ne-CEO ye-GE Power Portfolio. Uneminyaka engaphezu kwengu-25 yesipiliyoni ku-GE ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezindima eziphezulu.
"UDan waziwa ngokusebenzisana eduze namaqembu akhe kanye nokugxila kwamakhasimende," kusho isikhulu se-Delta u-Ed Bastian ememulweni kubasebenzi. "Uhlanganyela nathi emoyeni wethu wezinto ezintsha nokusebenzisana, kanye namagugu wethu wobuholi bezisebenzi, ukwethembeka, ubuqotho nokuhlonipha bonke abantu."
“Ngijabule kakhulu ukujoyina ithimba elinethalente leDelta, elidume ngamasiko alo amasha, asebenzisanayo futhi agxile kubantu. Njengomuntu osebenza njalo emaflaya futhi osebenzisana naye kwezamabhizinisi, ngikwazisa kakhulu ukuzibophezela okuqinile kweDelta kumakhasimende ayo, kanye nomsebenzi wayo onokwethenjelwa nothembekile, ”kusho uDan. “Ngibabonga kakhulu kakhulu engisebenza nabo nabangane kwa-GE, futhi ngibafisela ukuthi baqhubeke nempumelelo njengoba ngilangazelele ukubazi ozakwethu abasha eDelta.”
Kumemo wakhe, u-Ed ubonge uGary Chase noBill Carroll ngobuholi babo obukhethekile njengama-co-CFO wesikhashana. "Ukusebenzisana kwabo kanye nokwesekwa kwenhlangano yethu esezingeni lomhlaba yezezimali kube nomthelela omkhulu ekuqhubekeni kwethu ngokuthola kabusha," esho. "Ngiyaziqhenya ngomsebenzi omuhle wethimba lethu lezezimali kulo lonke lolu bhubhane nokuthi balubeke kanjani uhlangothi lweDelta ukuze luqine."
UDan, ohlala e-Atlanta nomkakhe, uTerri, nezingane ezintathu, bazojoyina iDelta kusukela ngoJulayi 12, 2021.